I-Omaha Drive Apartment - I-Airbnb
I-Omaha Drive Apartment
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Maryann
U-Maryann Ungumbungazi ovelele
Ikamelo lesimanje, eliqukethe ngokugcwele ikamelo elilodwa noma amabili phansi efulethini eliphambi kwegalofu. Indawo ilungele abantu abashadile abangu-1 noma abangu-2. (Ikamelo ngalinye liqukethe umbhede omkhulu) Ukuhamba okulula ukuya olwandle, ikilabhu yokutshuza emagagasini, ikilabhu yegalofu, izinkantolo zethenisi, indawo yokuhamba ngesikebhe, i-bowling green, izitolo, amathilomu nokunye okuningi.
Ihlelwe ku-Omaha Drive maqondana no-1 oluhlaza okotshani leli fulethi elivulekile livumela izivakashi ukuba zijabulele umlingo onikezwa yi-Omaha kanye ne-Matakana Coast ezungezile. Leli fulethi linendawo yokupaka ezimotweni ezingu-2 ngokuqondile ngaphandle. Izivakashi zingakwazi ukukhetha ukuqasha ikamelo elilodwa noma amabili. Kunendawo yokudlela evulekile, ikhishi elisebenza ngokugcwele elinendlu yangasese ehlukile negumbi lokugezela. Itiye nekhofi kuyatholakala.
Abanikazi uMaryann, uGeorge noBuddie (indawo enkulu enobungane begolide) bahlala ekhaya ngenhla kwefulethi.
Ilungele impelasonto yokushaywa wumoya yabadlali begalofu.
4.88 · 93 okushiwo abanye
Ifulethi le-Omaha Drive litholakala endaweni enhle maqondana ne-Omaha Estuary kanye ne-Omaha Golf Course. Ukungena efulethini ku-Caroline Heights okungaphandle kwe-Omaha Drive. Sizungezwe ezinye izakhamuzi ezihlala njalo kanye namakhaya athile amaholide.